जाडोमा चिया थरीथरीका : कुन बढी स्वस्थ्यकर त ? - Nepal's No.1 News portal
जाडोमा चिया थरीथरीका : कुन बढी स्वस्थ्यकर त ?
सञ्चार लाइभ प्रकाशित : 02/09/2021
काठमाडौं। चिया विश्वभरीमै सबैभन्दा बढी पिइने पेय पदार्थ हो । नेपालका मानिसहरुका लागि त चिया केवल एउटा पेय पदार्थ मात्र होइन, एउटा भावना समेत हो । बजारमा अनेकथरी चिया छन् । हर्बल टि, लेमनग्रास टि आदि । यी खासमा चिया होइनन् । चियामा मिश्रण गरिएका फ्लेबर हुन् । त्यसैले चियाको असली स्वाद लिनका लागि अर्थोडक्स चिया नै उपयुक्त हुन्छ । अर्थाेडक्स चिया पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन हुने मुना पत्तीबाट बन्छ ।
जब-जब तपाईंंलाई यस प्रकारको समस्या उत्पन्न हुन्छ । हामी मध्ये अधिकांश व्यक्तिहरु ओटिसी औषधि अर्थात् डाक्टरको सल्लाह बिना औषधि पसलबाट किनिने औषधिले काम चलाउँछौं । तर, त्यसले कति प्रकारका साइड इफेक्टहरु गर्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिँदैनौं । त्यस्तो बेला यहाँ उल्लेखित हर्बल टी सेवन गर्नुभयो भने तपाईंंको पेट फूल्ने समस्या समाधान हुनेछ ।
जब-जब तपाईंंको पाचन तन्त्रसँग जोडिएको समस्या पैदा हुन्छ । त्यसमा राहत पुर्‍याउनका लागि बेसारको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ । एन्टिइन्फ्लेमेट्री तथा एन्टिअक्सिडेन्ट प्रोपर्टीका कारणले बेसारको प्रयोगले थुप्रै प्रकारका बिमारीहरुलाई टाढा राख्न सकिन्छ । बेसारसँगै चियामा एक चुट्की मरिच पनि राख्नुपर्छ । यो चियाको सेवले पेटबाट ग्यास, पेट फूल्ने समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ र पाचन प्रणाली पनि राम्रो भइरहन्छ ।
पेट तथा पाचनसँग जोडिएको समस्या जस्तै पेटको दुःखाई, पेट फुल्नु अथवा कब्जियतलाई टाढा राख्नका लागि लामो समयदेखि सौंप (सूप) को प्रयोग गर्दै आइएको छ । सौंपमा त्यस्तो कम्पाउण्ड पाउन सकिन्छ । जसले ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल ट्रयाक्टको प्यासेजलाई रिल्याक्स गराउँछ । जसबाट पेटमा भरिएको ग्यास सजिलै बाहिर निस्कन्छ । तपाईंंले चाहनुभयो भने सौपलाई पानी अथवा सौंपलाई चियामा मिसाएर पनि सेवन गर्न सक्नुहुनेछ ।
मिन्ट अर्थात् पुदिनाको स्वाद निकै कूल तथा रि-प|mेशिङ हुन्छ । जसले पाचन प्रणालीसँग जोडिएका समस्याहरुलाई हटाउन मद्दत पुर्‍याउँछ । पुदिनको पातहरुमा एन्टिस्पासमोडिक प्रोपर्टी हुन्छ । जसले मशल क्य्राम्पस तथा स्पास्ममा राहत दिलाउन सहयोग पुर्‍याउँछ । जसबाट पेटमा हुने दुखाईबाट आराम मिल्छ । पुदिनाको पातबाट बनाइएको चियाले तपाईंं विभिन्न प्रकारका फाइदाहरु दिनसक्छ ।
अदुवा पनि पेटसँग सम्बन्धित समस्याहरुलाई टाढा राख्नका लागि सबैभन्दा उपयुक्त मानिन्छ । अधिकांश व्यक्तिहरु पेट फूल्ने समस्इा अथवा डाइरियाको समस्यामा अदुवाका सप्लिमेन्ट्सहरु प्रयोग गर्छन् । अदुवामा जिन्जरल नामक बायो एक्टिभ कम्पाउण्ड पाउन सकिन्छ, जसले पेट फुल्ने समस्यालाई कम गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । त्यसो त अदुवाको चिया बनाउनका लागि ताजा अदुवाकै प्रयोग गर्नु पर्छ । किनभने त्यसमा एन्टिअक्सिडेन्ट अत्यधिक हुन्छ ।